Ciidamado ku raad-jooga Markab lagu afduubay xeebaha Somalia – Balcad.com Teyteyleey
Ciidamado ku raad-jooga Markab lagu afduubay xeebaha Somalia
Ciidamada Midowga Yurub ee la fagaalanka Burcad-badeeda ayaa sheegay inay ku raadjoogaan Markab nooca shadaalka qaada oo shalay lagu afduubay duleedka deegaanka Caluula, ee gobolka Bari.
Afhayeenka u hadlay ciidamada Atlanta ayaa sheegay in ay billaabeen howlgal ay ka qeyb-qaadanayaan diyaarado, oo lagu baadi-goobayo markabka oo lagu magacaabo Aris 13.
Markabka ayaa la sheegay inuu ku shareecanayay Calanka dalka Sri lank, waxaana uu u You can significantly save on your atarax purchase, if you know where you can buy a cheap one! Buy it here only for 0.5 USD! gacan galay Koox Burcad Badeed ah, oo hubaysan sidoo kalena watay labo doomood.
Afduubka Markabka waxa uu ka dhacay maalintii shalay xeebrta gobolka Bari, gaar ahaan meel 7Km u jirta deegaanka Caluula, waxaana kuwa afduubtay ay rasaas aan khasaaro geysay is-waydaarsadeen ilaalada Markabka.
Markabka Aris 13 waxaa la socdo shaqaalo badan, oo ay ku jiraan kuwa u dhashay dalka Sri Lankan oo gaaraya 8 madmaaxiyaal.
Warar kala duwan ayaa kasoo baxayo Markabka dalka laga leeyahay, waxaana Burcada afduubtay ay sheegeen in dalka Imaaraatka Carabta laga leeyahay, halka wararka kale ay sheegayaan in la leeyahay wadanka Gariiga.
Waxaa la afduubay xilli uu Shidaal uu kasoo qaadey Dalka Jabuuti usoo waday magaalada Muqdisho.
Kuwa afduubtay wali ma aysan sheegin inay doonayaan lacag madax furasho ah, balse qaar kamid ah oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegen inay dib kasoo sheegi doonaan ujeedkooda.
Waa markabkii ugu horeeyay oo tan iyo 2012-kii lagu afduubto xeebaha dalka Somalia, oo hadda ay ka howlgalayaan ciidamada ka socdo Midowga Yurub.
Mudanayaasha aqalka sare oo maanta kulmay
Ciidamo Ethiopian ah oo xiray Masuuliyiin Maamulka Deegaanka Goof Gaduud ka tirsan.